သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: ကမ္ဘာမပျက်ခင် တစ်လ အလို….
မတောက်တခေါက် ရှိနေတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ပညာလေးနဲ့ အစွမ်းအစတွေဟာ မြန်မာပြည်အတွက် ရာခိုင်နှုန်းအနည်းငယ်သာ ဖြစ်နေခဲ့မှုအတွက်တော့ နောင်တတွေနဲ့အတူ ၀မ်းနည်းမိမယ်။
မသေမရှင်ဖြစ်နေမှာ… နာကျင်နေမှာတော့ ကြောက်တယ်။ တစ်ခါတည်း ဖြုန်းဆို သေသွားချင်တယ်။
ကျမ ဘာကိုမှ ဆောင်မထားချင်ပါ။
သဲသောင်ပြင်ပေါ်မှာ “ဒီကမ္ဘာမြေ အတွက်၊ ဒီဘ၀ဖြစ်တည်မှုတစ်ခုအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” ဆိုတဲ့ တစ်ကြောင်းလောက်တော့ ရေးမိမယ် ထင်တယ်။
တစ်ကယ်တော့ လူတွေဟာ ပျှမ်းမျှ အသက် ၈၀ နေကြတယ်ဆိုရင်တောင် ရက်ပေါင်း သုံးသောင်းကျော်ကျော်လေးပဲ အသက်ရှင်ကြတာပါလား။ ရှင်သန်ခြင်းနဲ့သေခြင်းဆိုတာ အစနဲ့အဆုံးမဟုတ်ဘူး၊ transition periods တွေလို့ ယုံကြည်တဲ့အတွက်.. ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာဦးမလည်း။
သေဆုံးခြင်း တဘက်မှာ နတ္ထိဆိုရင်တော့ ဘ၀ဖြစ်တည်မှုနဲ့ ဆုံခဲ့ရတဲ့သူတွေ၊ အဖြစ်တွေဟာ လွမ်းစရာကြီးပါလား။ လူ့သမိုင်းတစ်ခုလုံးမှာတည်ဆောက်ခဲ့ကြတဲ့ ငြင်းခုံခဲ့ကြတဲ့၊ တွေးခေါ်ကြတဲ့ အရာတွေဖြစ်တဲ့ တွေးခေါ်မှုဆိုင်ရာအသိတွေ၊ သိပ္ပံအတတ်တွေ၊ ဘာသာတရားတွေ အားလုံးဟာ အချည်းနှီးအရာတွေပဲ။
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဂုဏ်ယူရလောက်အောင် ဘာတစ်ခုမှတော့ မလုပ်ခဲ့ဖူးဘူး။ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာတွေကို လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်လို့၊ ကိုယ်လည်းလုပ်ချင်လို့ လုပ်ခဲ့တာပဲရှိပါတယ်။ ဂုဏ်ယူချင်လို့ ဂုဏ်ရအောင်လို့ လုပ်တဲ့အတွက် မဟုတ်လို့ ကျမသေခါနီးအချိန် မိမိကိုယ်ကို ဘာကိုမှ ဂုဏ်ယူလိမ့်မည် မထင်ပါ။
ကမ္ဘာပျက်မှာကို ၀မ်းမနည်းတဲ့အတွက်.. ဖြေသိမ့်စရာမလိုပါ။
I’ve enjoyed my life, I have lived my life and I am more than ready to go (die).
အမြဲစိမ်းဖြိုး နဲ့ ဏီလင်းညိုကို တက်ဂ် ချင်ပါတယ်….
related post that i want to share ခရီး
ကမ္ဘာပျက်မှာကို ဝမ်းမနည်းဘူး… ဟုတ်တယ်…ဒို့ရောဘဲ
Comment by rose of sharon — November 7, 2009 @ 6:30 pm |Edit This
Comment by တောသားလေး — November 7, 2009 @ 6:47 pm |Edit This
ကမ္ဘာပျက်မယ်ဆိုတော့ အဖော်အပေါင်းနဲ့ သေရမှာဆိုတော့ ပျော်စရာကြီးပေါ့ဗျာ။ ခရစ်ယာန်လိုဆို ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကို အမြန်ရောက်မယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာလိုဆို အမြန်ဆုံးနည်းနဲ့ နောက်ဘဝ မြန်မြန်ရောက်မယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ သေရမှာကို ဂုဏ်ယူမိမယ် ထင်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သေခြင်းတရားကို လောကကို အရှုံးပေး လက်လျော့နေရတဲ့ အချိန်မှာ ရင်ဆိုင်ရတာထက် အခုလို ကျန်းမာ သန်စွမ်းနေတဲ့ အချိန်မှာ ရင်ဆိုင်ရတာ ပိုအဆင်ပြေမယ် ထင်တယ်။ :) Thanks for your post.
Comment by Minn Yoon Thit — November 7, 2009 @ 11:25 pm |Edit This
အတွေးအမြင်သစ်တွေရသွားပါတယ်… နောင်များလဲလာပါအုံးမယ်.. ခွင့်တောင်းပါရစေ..အိမ့်ချမ်းမြေ့။
Comment by အယ်ကို — November 8, 2009 @ 4:34 am |Edit This
ပန်းတိုင်ဆိုတာ နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကွယ်ပျောက်ဖူးတဲ့ သူတွေအဖို့ ကမ္ဘာ ဖြစ်တည်/ပျက်သုဉ်းမှု ဆိုတာတွေဟာ သိပ်အရေးပါမယ်မထင်ဘူး၊
အဆိုးထဲက အကောင်းရှာပြီးနေထိုင် ပြုကျင့်ရသူတစ်ဦးအတွက် အကောင်းတွေရှာစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ :D :D :D
စာရေးသူပြောပြတဲ့အချက်တွေထဲကမှ ဖြစ်ချင်တာတွေတော့ ရှိတယ် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်တူမှာ မဟုတ်သလို ဆွေးနွေးလည်း မီးစာကုန်ဆီခန်းသွားမယ်ထင်တယ်ဗျ
အင်း . … . . . ရှာကြံတွေးပြီး ရေးတတ်ပြန်ပြီ။ ။ ။
Comment by ဒေါင်းသေချောင်းမှာ ပျော်သည့် ကျား — November 8, 2009 @ 9:53 am |Edit This
I’ll write your tag as soon as possible. My laptop has broken down and is in service center. It may take may be more thanaweek. I’m sure I’ll get back to blogging ASAP. Thanks for tagging me :D
Comment by Evergreen Phyo — November 8, 2009 @ 3:59 pm |Edit This
(မရရင် မလေးရေးထားတာတွေ ခိုးချဖို့လေ…အဟီး….)
Comment by ဏီလင်းညို — November 8, 2009 @ 4:26 pm |Edit This
သာမန်ကာ လျှံကာ ဖတ်သွားပါတယ်
Comment by ဂျေဂျူဝိုင် — November 8, 2009 @ 11:48 pm |Edit This
Ma Lay have you read “Purpose driven life” by Rick Warren before? If not, I encourage you to read it. I just did and it was awesome.
Comment by lynda — November 9, 2009 @ 11:49 am |Edit This
မလေးရဲ့ အတွေးလေးက ကောင်းပါတယ်။ ဒီပိုစ့်လေးတွေကို လိုက်ဖတ်ခဲ့ဘူးတယ်။ သေရမှာကို မကြောက်အောင် အပျော်သဘောနဲ့ ရေးထားတာတွေလည်း ဖတ်ရတယ်၊ တချို့ကတော့ သေခါနီးမှာ နေတတ် သေတတ်ဖုိ့ကို တရားသဘောတွေနဲ့ မြင်နိုင်အောင် ရေးခဲ့ကြတယ်။ မလေးရဲ့ အရေးအသားလေးကြတော့လည်း တမျိုးလေးပဲနော်။ သေရမှာကို မကြောက်တဲ့အပြင် ဒီကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ လူဖြစ်ခွင့်ရခဲ့တာလေးကို ကျေးဇူးပြန်တင်သွားတယ်။ ဖြစ်လာမယ့် အရာတွေကိုလည်း ခံနိုင်ရည်ရှိအောင် ပြင်ဆင်ထားတာလည်း တွေ့ရတယ်။
အတွေးကောင်းလေးနဲ့ အရေးအသားလေးကို မှတ်သားသွားပါတယ်နော်။
Comment by ဒဏ္ဍာရီ — November 9, 2009 @ 6:41 pm |Edit This
Comment by ဏီလင်းညို — November 10, 2009 @ 8:30 pm |Edit This
လာလည်ဖတ်ရှုကြသော သူများအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်..
Comment by မလေး — November 13, 2009 @ 12:40 am |Edit This
ဗုဒ္စဘာသာ မို့လားတော့မသိဘူး အစ်မရေ့ တစ်နေ့ကျရင် သေရကြမှာကြီးပဲမို့ သေခြင်းတရားအတွက် ကမ္ဘာ ပျက်မှာကိုလည်း တွေးပူမနေတော့ပါဘူးး) ဒါတောင် ဘုရားသုံကြိမ်ပဲ ချလို့နော့် ဘုန်းကြီးဝတ်လိုက်ရင် ဘယ်လိုနေမလဲမသိ ဟဟား ။
Comment by မောင်မျိုး — November 15, 2009 @ 7:26 am |Edit This
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 12:25 AM
ကျွန်တော့် အထင်တော့ သိရိလင်္ကာက ဘုန်းဘုန်းတစ်ပါးဒီလိုတွေ လာမေးဖူးတယ်။ သူ့မေးခွန်းတွေ အတိုင်းပါပဲ။